အဆီလောင်ကျွမ်းစေသောစွပ်ပြုတ် - ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အသုံးဝင်သောချက်ပြုတ်နည်းများစွာ
အပေါ် Posted 27.09.2021 27.09.2021
သင်ဝိတ်ကျလိုပါသလား။ ဘယ်အစားအစာကိုရွေးရမှန်းမသိဘူးလား။ ပြီးတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ငါတို့မင်းကိုပြမယ်။
အပေါ် Posted 02.08.2021 02.08.2021
အပေါ် Posted 28.07.2021 28.07.2021
သဘာဝသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှစ်သက်ပြီးနှစ်သက်စေသည်၊ ဥပမာပန်းရောင်ရွှံ့သည်မျက်နှာအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ၎င်းမှမျက်နှာဖုံးမျိုးစုံကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားသောအသားအရေအမျိုးအစားများအတွက်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ
အပေါ် Posted 27.07.2021 27.07.2021
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြရန်မလိုပါ၊ အရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်။ လေကိုစားပါ။ အခြေခံစည်းမျဉ်းများအနက်တစ်ခုမှာဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။
အပေါ် Posted 23.07.2021 23.07.2021
မင်းဘယ်လိုကိုယ်အလေးချိန်ကျတာလဲ ရိုးရှင်းသော်လည်းထိရောက်မှုရှိသောဟင်းချိုအစားအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အရသာရှိတာအမှန်ပဲ။
အပေါ် Posted 17.04.2021 17.04.2021
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများစွာရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့အားတိုက်ရိုက်မမေးပါ။ သူတို့အနည်းဆုံးအချို့ကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။
thrombosis ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။ သွေးပြန်ကြောများတွင် thrombosis ဖြစ်လျှင်သွေးခဲများပေါ်လာပြီးသွေးကြောအတွင်းရှိ erythrocytes, leukocytes, platelets နှင့် fibrin တို့ပါ ၀ င်သည်။
အတင်းအကျပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ Fallopian ပြွန်များသည်ဓာတ်မြေသြဇာဥသည်ပြွန်၏အစမှသည်သားအိမ်ထဲသို့ရွေ့လျားစေသောအင်္ဂါဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဓာတ်မြေသြဇာရှိသည်။ သားဥအိမ်သည် ၁၀ ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီး ...
ဘာကြောင့် pseudoephedrine ပါ ၀ င်သောဆေးများကိုရုရှားတွင်အဘယ်ကြောင့်တားမြစ်ထားသနည်း ယင်းသည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤဆေးများသည်နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာကိုသက်သာပျောက်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နောက်ဘက်သားအိမ်ခေါင်းကြွက်သားများကို (အကြားနှင့်အောက်အကြား) နှိပ်၍ ခေါင်းကိုနုပျိုသောလူတစ်ယောက်နှင့်ပွတ်ပါ၊ လက်ဖက်ရည်ပူသောက်ပါ။ စစ်ဆေးမှုသို့နွေးထွေးသောခွက်နှင့်တွဲပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပျားအဆိပ်ကိုအခြေခံပြီးဆီမွှေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ APIZAPTPOH (APISARTHRON) သောက်သုံးသောပုံစံ - ပြင်ပသုံးစွဲရန်ဆီမွှေး။ ဖွဲ့စည်းမှု - ပြင်ပအသုံးပြုရန်ဆီမွှေး ၁၀၀ ဂရမ်တွင်ပါဝင်သည်။ ပျားအဆိပ်သင့်ခြင်း - Zmg Methyl salicylate ...
မစင်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးနေတာလဲ။ သင်အမှိုက်သရိုက်များကိုထုတ်ပစ်လိုက်သောအခါရက်ပေါင်းများစွာကြာသော်လည်းအနံ့ဆိုးထွက်သည်။ အစာအိမ်အတွင်း၌သင်စားသောအမှိုက်သရိုက်များကဲ့သို့ပင်။ "ရိုင်းစိုင်းပါတယ် ...
မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အဓိပ္ပါယ်မှာဘာလဲ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း 10b မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအားပြင်းထန်စွာနာကျင်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုချခြင်း၊ သဘာ ၀ ကိုမူးယစ်စေခြင်းနှင့်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ကဘယ်အချိန်လဲ 7ပြီလ ၇ ရက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်သည့်နေ့တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင် ...
အဘယ်အရာကိုအသင်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်? microflora ကိုချိုးဖောက်ခြင်း ... အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့် Yandex သည်ကြွင်းသောအရာအား le4ites y allergologa သို့ဓါတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအတွက်ကူညီလိမ့်မည်။ ဆုံးဖြတ်ရန်သာ ...
သင်၏လက်၌ငွေလက်စွပ်သည်အဘယ်ကြောင့်မည်းသနည်း။ အကြောင်းမူကား၊ ငွေသည်ငွေပြတ်ခြင်း၊ ငါကြားရသည့်အတိုင်း တစ်ခုခုထဲ၌တစ်ခုခုရှိခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောအင်္ဂါများသည်နာခြင်းသို့မဟုတ်မျက်ခုံးများရှိခြင်း။ အမိုးနီးယားနှင့်အတူသန့်ရှင်းရေး။ ငါ ... လုပ်ပြီးပြီ
ရူပကုထုံးကားအဘယ်နည်း။ ဥပမာ - electropharesis Physiotherapy (ဂရိအမှတ် ၂၅၃ မှ SIS - သဘာဝနှင့်ကုထုံး) သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆိုင်ရာကုသမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ etol အားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး electropharesis Physiotherapy (ရူပဗေဒနှင့် prophylactic ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများကိုတီထွင်သည်) ။
Seborrhea, ဒီရောဂါကဘာလဲ ကူးစက်နိုင်သော ??? ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် seborrhea သည်မှိုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမှိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှိုသည်ကူးစက်တတ်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ညံ့ဖျင်းစွာပြုပြင်လျှင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူတစ် ဦး ၌၎င်းကိုကောက်နိုင်သည်။